Adeegsiga Caadiga ah GarageBand si loo saxo Qalabkaaga Maqalka Hooseeya | Martech Zone
Waxaan dhisnay wax aan caadi aheyn istuudiyaha Podcast ee Indianapolis oo leh qalab casri ah oo casri ah iyo makarafoono tayo leh istuudiyaha. Anigu ma shaqeynayo wax software gaar ah, in kastoo. Kaliya waxaan u sooqaadaa wax soosaarka mashiinka si toos ah Garageband halkaas oo aan ku duubo qormooyin kasta oo mikro-ga ah oo lagu raaco raad madaxbannaan.
Laakiin, xitaa iyada oo wax soo saarkayga waxsoosaarka ah ee USB-ga la kordhiyo, codka si fudud kuma soo galo mug wanaagsan. Garageband gudahiisa waxaan ku kordhin karaa mugga raad kasta, laakiin markaa ma haysto meel aan ku hagaajiyo mid kasta oo la xiriira midba midka kale hawshayda soo-saarka ka dib.
Waa tan sida maqalku u egyahay markii la duubo. Waxaad arki kartaa farqiga xad dhaafka ah ee udhaxeeya labada wadood ee maqalka korka ah iyo soo galkeena xirfadeysan, xayeysiiska, iyo dibedda. Si fudud ma jiraan qol ku filan oo ku habboon goobaha si loo hagaajiyo.
Garageband wuxuu leeyahay muuqaal aan jeclahay oo aan necbahay - caadeysiga. Haddii aad jeceshahay inaad xakameyso mugga wax soosaarkaaga adoo adeegsanaya Garageband, waad neceb tahay. Caadiyan waxay la wareegeysaa dhoofinta waxayna ku hagaajineysaa muggaaga tayadoodii (su'aal baa ka taagan) dib u ciyaarid.
Arrinta kore, in kastoo, waxaan u adeegsan karnaa caadi ahaanta faa'iidadeena. Haddii aad aamusto dhammaanteed laakiin hal waddo, u dhoofiso wadada shakhsiga ah (aiff si aanad u lumin tayada sida leh mp3) oo aad u sameyso waddo kasta waxay caadi ka noqon doonaan dhoofinta Markaa waad tirtiri kartaa codkaaga dariiq kasta oo mashruucaaga ka mid ah, oo aad dib u soo dhoofiso wax soo saar, fayl maqal caadi ah.
Waa tan natiijada:
Hadda u fiirso maqalka mid kasta oo ka mid ah dariiqyada codka (labada hore). Hadda waxay isku mid yihiin mugga midba midka kale waxaana lagu hagaajin karaa si fudud marka loo eego intros, xayeysiiska, dibedda iyo midba midka kale. Waxaan rajeynayaa inay tani kaa caawin doonto sida ay ii caawisay! Haddii aad hayso siyaabo dheeri ah oo aad uga caawin karto arrintan, ila soo socodsii.
Tags: aiffaudioraadadka maqalkagaraashkagaraashka caadiga ahmikroofanadamp3caadeysigatracks
Sida loo rakibo Google Tag Manager iyo Universal Analytics
Hadii kaliya ay jiri laheyd wado lagu “Normaalis” raadadka ka hor dhoofinta. Waxay umuuqataa tallaabo dheeri ah oo aan loo baahnayn.
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay, Bram. Marka la eego sumcadda baahinta iyo xaqiiqda ah inaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho tirada ka baxsan xadka Garageband, waa wax laga xumaado in aysan ku siinin xakameyn dheeraad ah. Waxaan dhawaan bilownay adeegsiga Auphonic si loo barto faylasha codka. Maaha wax raqiis ah, laakiin si fiican ayey u shaqeysaa.